Ukomisa Izithelo Nemifino
Inqwaba yezithelo zaseNingizimu Afrika, ezinjengezithelo zomvini, ama-apula, amapentshisi, ama-apula, amapharele, ubhanana wemango. Ukomisa kususa umswakama, okhuthaza isikhunta, imvubelo nokukhula kwamagciwane, ngenxa yalokho kuthuthukisa i-raflufu yezithelo. Futhi kunciphisa isisindo nosayizi wezithelo, kwenze kube kushibhile futhi kube lula ukuthutha.
Noma yiziphi izithelo nemifino zingomile ngobuchwepheshe, kepha ezinye izinhlobo zilungele ukoma kunezinye. Njengoba kushiwo ngu-Anton Erwee, isikhulu esisebenzayo se-At Source Handmade Foods, izinhlobonhlobo ezingalungile zizophumela kumkhiqizo wokugcina onomzimba omncane noma owomzimba omncane.
Izithelo nemifino okuhloswe ngayo emakethe yokomisa, njenganoma yikuphi okunye okuhlukahlukene, kuhlolwa kabanzi ngaphambi kokuba ikhishwe ngenjongo yokuthengisa. Izinhlobo kumele zingafaneleki kuphela ukoma nokugcina umbala ngemuva kokoma kepha zikhiqize isivuno esanele ngesikhathi esifanele sonyaka ngokusebenza okuncane nokunye okokufaka.
Izithelo Ezithambile Noma Eziqinile
Izithelo zingavuselelwa ngemuva kokoma noma zithengiswe ngaphandle kokunye ukwelashwa. Izithelo ezifakwe kabusha zithambile futhi kulula ukuzidlula kunezithelo ezingalashwa, kepha zibe ne-elfffupi elifushane. Izithelo ezinjengamajikijolo zingaphathwa ngesisombululo sikashukela, njengejusi yamagilebhisi, ngaphambi kokuba zome ukuze zibavimbe kangangokuba zingabi namandla.
Iningi lezithelo ezomile zaseNingizimu Afrika zomiswa emokomeni yokucima ukoma elangeni ngemuva kokuba zikhethiwe, ngenxa yokukhululeka kokukhiqiza nezindleko ezihambisana nakho eziphansi. Njengoba izimo zezulu ezingezinhle zingadala ukukhula kwesikhunta kanye nokwehla kwezithelo, iningi lezithelo zomile endaweni yemvula ebusika ezifundeni ezinjengeBoland, Ceres Valley, neKlein Karoo eWestern Cape kanye nase-Orange River Valley e-Enyakatho Kapa.
Okudonsela phansi okukhulu ngomiswe elanga ukuthi abakhiqizi banokulawula okuncane kakhulu ezimeni zezulu futhi, ngenxa yalokho, inqubo yomile. Ukuze uthele izithelo ezingcono zekhwalithi, inani elincane labakhiqizi libuyele emiseleni yokuwomisa ukuze kunciphise ubungozi besimo sezulu futhi liqinisekise nezithelo ezomisiwe ezisezingeni eliphakeme. Ugesi uyabiza, ngakho abalimi basebenzisa imithombo yemvelo, efana ne-biomass noma i-solar energy, ukufaka amandla inqubo yokumisa.
U-Anton uthi izithelo eziningi ezomisiwe ziphathwa nge-sulphur dioxide ngaphambi kwesigaba sokumisa, ukuze kubhidlizwe izingqimba zeseli zezithelo kanye nokwenza lula inqubo yomiswa. I-Sulphur dioxide iyasiza futhi ukuvikela izinqubo ezingezona ze-enzymatic browning zezithelo. Lokhu kuvumela izithelo ukuba zilondoloze umbala wazo futhi zisebenze njengesibambiso segciwane esisiza ekuqinisekiseni ukuthi ukudla kuphephile ukudliwa yize kushiywe izinsuku ezimbalwa ukuba zome.
Izithelo ezinombala omnyama kulo, njengezithelo zamakhiwane, zomdiliya, zomhluzi nezinsuku ngokuvamile aziphathwa nge-sulphur dioxide.
Izithelo ezomile zaseNingizimu Afrika zifunwa kakhulu ngaphakathi nangaphandle.
Izithelo ezomisiwe zingajatshulelwa njenge-snack noma kusetshenziselwe ukupheka nanjenge-dessert. Izithelo ezomile ziphezulu ku-fibre, antioxidants futhi zinempilo kakhulu. Ingxenye eyodwa yezithelo ezomisiwe kuthiwa inenani elifanayo lokudla okunempilo nelolo lwesithelo esisha. Kukhona nokho okuhlukile, njengoba ezinye izakhi zomzimba, ezinjengevithamini C zingase zilahleke ngenkathi inqubo yomiswa.